တစ်ယောက်တည်း ကြည့်ရတာ ကြောက်လာတာနဲ့ ဂျီတော့လေးဖွင့်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ 
စကားပြောမယ်ပေါ့ ...ကြည့်လိုက်တာ ဘယ်သူမှ လိုင်းပေါ်မှာမရှိ ..။
အဲဒါနဲ့ယွန်းတို့ လည်း တစ်ယောက်ယောက် စကားလာပြောအောင် ကြံရတာပေါ့ ။
ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားနေတုန်း စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကို
သွားသတိရလာတယ် ..။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က facebook မှာ ရေးထားတဲ့ စာလေးတစ်ကြောင်းပေ့ါ။
လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ သိပ်စိတ်ရူပ်ဖို့ ကောင်းတယ် ဆိုလားးး ဘာလားးး
ယွန်းလဲ ခပ်တည်တည်နဲ့အဲဒိစာကြောင်းလေးကို ဂျီတော့ မက်ဆေ့ခ်ျဘားမှာ ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။
သိပ်မကြာပါဘူးး။တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လာမေးလိုက်ကြတာ ..ပြန်ဖြေရတာ
လက်တောင်မလည်ဘူးး.....ဟီဟိ....( ဂျီပုန်းဖမ်းတဲ့ နည်းတွေမှာ ဒီနည်း အကောင်းဆုံးးး)
ယွန်း ..ဘာဖြစ်လို့ လဲ....
ဘာတွေအဆင်မပြေ ဖြစ်နေလဲ မယွန်းးး
အဲလို...အဲလို ( ပုန်းနေတဲ့သူတွေ ) မေးလိုက်ကြတာများ..ဟီဟီးးး..ဒီကလဲမှင်သေသေနဲ့ ....
ဒီလိုပါပဲပေါ့.....( ပြန်ဖြေတာ....ပြန်ဖြေတာ...ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ .)
တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးးးသရဲကားကြည့်ပြီးကြောက်လို့..စကားပြောဖေါ်ရှာလိုက်တာ..
(အဲဒိနေ့ က စိတ်ပူပြီးး လာမေးတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
ယွန်းတို့ က သတ္တိကောင်းတာများ ပြောမနေနဲ့..သွေးမြင်ရင်တောင် ခေါင်းမူးတတ်လို့ ..
ကျန်စစ်သားနဲ့အမျိုးတော်တယ် ...ကွိကွိ...
လူမကြောက်ဘူးးး သရဲတော့ ကြောက်တတ်တယ် ...ဒါပေမဲ့ သရဲဇာတ်လမ်းဆို ရှေ့ဆုံးကပြေးဖတ်တယ်
ဘကျောက်တို့ ..ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ)တို့ မှာ သရဲဇာတ်လမ်း တင်ပြီဆို သွားသွားဖတ်ရတာ အမော..
ပြီးရင် တွေးပြီးကြောက်ရတာနဲ့မြင်ယောင်ပြီး ကြောက်ရတာနဲ့..အို .. ရှူပ်နေတာပဲ...
ဒီကြားထဲ သရဲ ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ ကိုဇောင်း က ထိုင်းသရဲကားဝက်ဆိုဒ် ပို့ ပေးလိုက်သေးတယ်...
အဲဒါထားဦးးအဲနေ့ က လာမေးတဲ့ သူတွေအကုန်လုံးးး ကြည့်လိုက်တော့ ဂျီပုန်းလေးတွေနဲ့ ...
ပုန်းနေကြတာ ..ပုန်းနေကြတာ...ယွန်းလိုင်းပေါ်စတက်တော့ ..ဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်နေတာ ..
ငြိမ်နေကြတယ်ဆိုတော့ ..ဘယ်ဟုတ်မလဲ ..သူတို့ က ပုန်းနေတာကိုးးးး :)
ဂျီပုန်းလေးတွေကိုယ်စီနဲ့တယ်လဲအလုပ်ဖြစ်သကိုးးး
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ပုန်းတာ စတေးရှောင်တာ တော်တော် ခေတ်စားသကိုးးး
ဟိုလူလဲပုန်းးး ဒီလူလဲပုန်းဆိုတော့ ..ယွန်းတို့ လည်းပုန်းနိုင်မှ ခေတ်မီမဟဲ့ဆိုပြီးးးးး
ခပ်မြန်မြန်လေး ပုန်းလိုက်တာပေါ့....ဟွင်းဟွင်းး ဘယ်ရမလဲ..နာကွ..နာကွ... :D
ဟယ်..ယွန်းးး out သွားပီလားးလိုင်းကျသွားတာထင်တယ် ...တဲ့..
ကိုယ်က ပုန်းးးနေတာဆိုတော့လေ..ကွိကွိ....နောက်မှ ပြန်ချော့ရဦးမယ်...
သူငယ်ချင်းတွေကို စ ရ..နောက်ရတာ တော်တော် ပျော်စရာကောင်းတယ်....
နောက်လဲ ခေတ်မီအောင် ဂျီပုန်းလေးတော့ဆောင်ထား ဦးမှ ..... :D :D :D
စာရေးသူ ယွန်း မှ 2:21 AM
ဟဟား လိုရမယ်ရ ဆောင်ထားတယ်ပေါ့လေး)
ဒေါ်ယွန်းဗျူဟာဆိုပြီး ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ လုပ်စားအုံးမှ:P
ပုန်းတဲ့သူကို ပုန်းနေမှန်းသိအောင် ဖော်တဲ့နည်းရှိတယ်
အားကျမခံ ပြန်တင်လိုက်ဦးမှထင်တယ်.း)
ဂျီပုန်း ဆိုလို့ အခြောက်တွေ အကြောင်းများလားလို့ ရှောက်သီးဆေးပြားလေး စားရနဲလား ဆိုပြီး လာဖတ်ပါတယ်
သရဲများ မကြောက်ပါနဲ့ ညကြ လာလိမ့်မယ်
အောင်မယ် ဒေါ်ယွန်းတို့တော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ဆိုပြီး လာတာ။ သူလဲ နာ့လိုပဲကိုး။ ကျွန်တော့်လိုပဲ ဂျီပုန်း လုပ်တယ်။ သရဲကားကြည့်တယ်။
သရဲကတော့ မမချစ် ပြောသလိုပါပဲ။ မကြောက်ပါနဲ့ ယွန်းအခန်းထောင့် က မျက်နှာကျက်မှာ တွဲလောင်းလေး
ဂျီပုန်းက ဆိုလို ဟိုလိုများ ပုန်းတာလားလို့။ ဒီလိုပုန်းတာလား။ အင်း... အင်း...ပုန်းလို့ ကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
သူများတွေလို မပုံးတတ်တော့ ကိုယ်ရှိမှန်းပေါလောကြီးကို အမြဲပေါ်နေတာပဲ ..
ဘယ်လိုပုန်းရမှန်းမသိတာနဲ့ တတိန်တိန်..နဲ့တက်လာသမျှ ထိုင်ပြောနေရတယ်..စာတောင်မဖတ်နိုင်ဘူး
အော်....သိပီသိပီ ဂျီပုန်းဆိုတာ သူကိုး :) စသွားပါတယ် ယွန်းရေ....
လာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အားနာလိုက်တာ ..ကိုယ်ထင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာ မဟုတ်တော့လေ
ဂျီတော့မှာ ပုန်းနေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို စချင်နောက်ချင်တာနဲ့ဒီပို့ စ်ကိုရေးလိုက်တာ..
သြော် ဂလိုလား..သိမယ် သိမယ်.. မှတ်ထားနော် ဒေါ်ယွန်းလေး။
ပုန်းတာတော့ ပုန်းရမှာပေါ့၊ တချို့က Busy
ပြထားလည်း စာရိုက်တာပဲ၊ တချိုက
ကျပြန်တော့ မင်းက အမြဲတမ်း busy
နေလားလို့ လုပ်ပြန်ရော၊ မခက်ဘူးလား၊
ဒါကြောင့် ဂျီပုန်းတွေ များလာတာ ဖြစ်မယ်။
ပုန်းတတ်ပါတယ် ..ဒါပေမယ့် ဒီနည်းတော့ စမ်းမသုံးဘူးဘူးဗျ :P
မြတ်မွန်@>>>> စိတ်မဆိုးပါနဲ့ မွန်ရယ်..အဲနေ့ က လာမေးတဲ့အထဲမွန်လဲပါတယ် ဆိုတော့ နောက်တခါတွေ့ ရင် လက်စားမချေကျေးးး ဟီဟိ
ဂျီပုန်းကို အဲဒီလို ဖမ်းရင် တကယ်ရသလား။ ဒါကလဲ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ သနားတတ်တဲ့သူပါနေဦးမှ။ မဟုတ်လို့ကတော့ ထောင်ချောက်က မစွမ်းလောက်ဘူး။
အင်း ဒါလဲနည်းသစ်တစ်မျိုးပဲ နော်။
ကိုဏီးက.......“ဟာ.....ငါ့ညီမတော့ ငါတို့ပုန်းနေတဲ့နည်းတွေကို ဖော်ကုန်ပဟ”....ဆိုပြီး....အမြန်လာဖတ်တာ.......။
တော်သေးတယ် အဲဒီနေ့က မခေါ် လိုက်မိလို့း)
အို....တို့က ပုန်းမှ မပုန်းတတ်တာ၊
ပုန်းတဲ့နည်းတွေ သိချင်ပါဘူး....။ :P :P
ဖတ်သွားပါတယ်။ တောသားကြီးအကြိုက်တွေ့တဲ့ စာလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။